မိုးမခ –ုသဂုတ်လ စာကိုး စကားကိုး | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← စာရေးဆရာဋ္ဌကီး ဒဂုန်တာရာ ၏ သဘောထားအူမင်
မောင်ရစ် – ငၝ့တာဝန်အရေး ၃ ပၝး – ကာတနြ်း →
မိုးမခ –ုသဂုတ်လ စာကိုး စကားကိုး
ုသဂုတ်လ စာကိုး စကားကိုး
ကဋ္ဋန်တော်က သတင်းစာဖတ်ရင် နောက်ကေဵာဖုံးက စဖတ်တဲ့အကဵင့် ရြိတယ်။ အဓိကက ဖတ်ူဖစ်တာ စာမဵက်ြိာံတစ်ဆယ့်ကိုး နာရေး။္ဘပီးမြ ကဵန်တာတြေ ဖတ်လေ့ ဖတ်ထရြိတာ။ မဖတ်လိုႛမရဘူးလေ။ ကိုယ်လည်း တစ်ခဵိန် မနက်ူဖန်လာ၊ သန်ဘက်ခၝလား။ နေႛလား ညလား တစ်နာရီအတငြ်းလား။ တစ်မိနစ် တစ်စက္ကန်ႛအတငြ်းလား၊ တပ်အပ် မေူပိာုိံင်ဘူး။
အဲဒီနာရေးကိုဖတ်္ဘပီး သံဝေဂတေယြူ၊ူဖစ်ူခင်းပဵက်ူခင်းကိုံလြုံးသငြ်း၊ ဘယ်သူကတောူ့ဖင့် အသက် ဘယ်လောက်နဲႛ ကယ်ြလန်ြသြား္ဘပီး၊ ဘယ်သူကူဖင့် ငယ်ငယ်ရယ်ြရယ်ြနဲႛဘ၀တစ်ပၝးေူပာင်းသြား္ဘပီ စသည်ူဖင့်ပေၝ့လေ။
ကေဵာ်ထူး (လူရင်ြတော်၊ သ႟ုပ်ဆောင်)
၂၀၀၇ုသဂုတ် ပေၞူပလြာဂဵာနယ်
စယ်ြတော်ကိုမန်မိာုိံင်ငံက ဘုန်းဋ္ဌကီးတစ်ပၝးဆီက ရခဲ့တာလိုႛ ကေဵာင်းတည်တဲ့ကိုယ်တော်ကေူပာပၝတယ်။ သိုႛသော် စယ်ြတော်အပြာူးဖစ်ေုကာင်းကို သေခဵာေူပာပုံမရဘူး။ ကေဵာင်းကိုတောင် လုံဟြာူမတ်စယ်ြတော်ကေဵာင်း လိုႛပဲ အတိုခေၞတယ်။ ပြား ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ၀က်ြထားတယ်။ ဆိုတော့ စယ်ြတော်ပြားမပြားတော့ မသိဘူး၊ သေခဵာတာကတော့ လူတေအြုကား အူငင်းပြားစရာတြေူဖစ်လာပၝတော့တယ်၊
အင်တာနက်ပေၞက ဖိုရမ်တေမြာတော့ အဲဒီအေုကာင်းကို ဝေဖန်ထားတာ တော်တော်မဵားမဵား ဖတ်မိတယ်။ မန်ြသင့်သလောက် မန်ြပၝတယ်။ တရားဓမ္ထအားထုတ်ဖိုႛ အဓိကမဟုတ်ဘဲ အလြူပဖိုႛ၊ ရြိးလုပ်ဖိုႛနဲႛ ပိုတူတယ်။ သူမဵားနားမလည်တဲ့ ဘာသာစာလုံးတေနြဲႛ တန်ဆာဆင်ထားတာ လဖြိုႛသက်သက်ူဖစ်နေတယ်။္ဘပီးတော့ စယ်ြတော်ကို ခုတုံးလုပ်္ဘပီး လူတေကြို ခဵတြယ်၊ ငၝးပက်ြရာ ငၝးစာခဵတယ် စသူဖင့် … ။
ုသဂုတ် ၂၊ ၂၀၀၇ thantzinaung.blogspot.com/
မိစ္စာအာဇီဝအလုပ်ခဵင်းအတူတူ ဥပဒေနဲႛ္ဘငိစနြ်ိးုိံင်တဲ့ ဘိန်းတိုႛ ရေတြိုႛခိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ သိန်းကို ထောင်နဲႛခဵ္ဘီပီး ရင်းရတယ်။
အခြေ ခိုးကူးတဲ့သူတေကြ အမဵားဋ္ဌကီးရင်းစရာ မလိုဘူးလေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းရတယ်ဆိုတာကိုေူပာနေဖိုႛတောင်မလိုဘူး၊ အားလုံးသ္ဘိပီးသာူးဖစ်နေမြာပၝ။ ဘိန်ူးဖအြမဆြိုတာ သေဒဏ်ထိုိံင်တယ်၊ ခိုးကူးက သေဒဏ်မထိုိံင်ဘူးလေ။ူပစ်ဒဏ်မရြိတဲ့အတကြ် မိစ္စာအာဇီဝသမားတေဟြာ ဒီအခြေ ခိုးကူးဘက်ကို သိန်းရာနဲႛခဵ္ဘီပီး ရင်းတော့တာပဲ၊ … … ခိုးကူးဝယ်တဲ့ ပရိသတ်မြာ အူပစ်မရြိပၝဘူး၊ သူတိုႛကတော့ စေဵးသက်သာတဲ့ဟာကိုပဲ ရြေးခဵယ်ုကမြာပဲလေ …. ။
၂၀၀၀ူပည့်ိံစ်ြကတည်းက ခိုးကူးနဲႛပတ်သက်္ဘပီး နေႛတိုင်းလိုလို အ္ဘမဲ တိုင်ပင်ဆြေးြေိံးနေုကတာ အခုအထိပၝပဲဗဵာ။ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ဆြေးြေိံးလိုႛပဲရတာပၝ၊ ဖမ်းလိုႛမရပၝဘူး၊၊
၀င်းမင်းထြေး (သီခဵင်းရေးဆရာ၊ ကဗဵာဆရာ)
၂၀၀၇ုသဂုတ် ရတီမဂ္ဂဇင်း
အင်တာဗဵြိးံငြ့် သတင်းထောက်ကိုေုကာက်သူမဵားထဲတငြ် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူမဵားက ထိပ်ဆုံးမပြၝ၀င်သည်။ မယုံလ္တွင် ပဲစြားတေထြိုင်နေသော စကားဝိုင်းကို သြား္ဘပီး အင်တာဗဵြးပၝရစေလိုႛသာေူပာ၊ စောစောက ရေပက်မ၀င်အောင်ေူပာဆိုနေသောစကားသံမဵား တိတ်သြားလိမ့်မည်။ မီးကို ရေိံငြ့်္ဘငြိမ်းလိုက်သည့်ိံယြ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ုကည့်္ဘပီး အလ္တြွိလ္တြွိလစ်ုကလေ၏။
ုသဂုတ် ၂၄၊ ၂၀၀၇ူမန်မာတိုင်းမ်စ်ဂဵာနယ်
ကန်ြမန်ႛကိုတော့ ဒီမြာပဲရေးခဲ့ပၝရစေ၊ … … အူမင်မတူတာတေကြို လက်ခံလိုႛရပေမယ့် အိမ်ထဲဝင်ပစ်သတ်မြူပည်သူကိုသတ်တာမည်တယ် ဆိုတဲ့ အင်မတန် အိံ္ဇရာယ်ရိတြဲ့ ခံယူခဵက်မဵြိးတြေ ကိုတော့ သိပ်လိုအပ်လာရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛအားလုံး ဆက်လက်သုံးသပ် တင်ူပသြားရပၝမယ်၊ …
မောင်ရင် (ဘလော့ဂ် မတ်ြခဵက်ရေးသူ)
ုသဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၇ klosayhtoo.blogspot.com/2007/08/blog-post_29.html
(လေးဂနြဲႛပစ်ခံရပေမယ့်) ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက အမလြည်း မဖငြ့်ရဲဘူးဗဵ၊ ဘာူဖစ်လိုႛလဲဆိုတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက အမသြားဖငြ့်လိုက်ရင် ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကို သူတိုႛက မဟုတ်ကဟုတ်က တန်ူပန် တူခားအမတြေနြဲႛူပန်္ဘပီးဆ္ဘြဲပီး ကဋ္ဋန်တော်တိုႛကို ထောင်ခဵဦးမြာ။ ဥပမာ ဆိုပၝစိုႛဗဵာ၊ လန်ြခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲ အသံလငြ့်သြားသလိုပေၝ့၊ မတရားအကဵင့်ခံရတဲ့မိန်းကလေး သြားတိုင်တဲ့အခၝကဵတော့ သူႛကို မတရားကဵင့်တဲ့အမကြို မစစ်ဘဲနဲႛ တိုင်တာကိုပဲ အသရေဖဵက်မနြဲႛတိုင်တယ်ဆ္ဘိုပီး အဲဒီအမြ အရင်စစ်္ဘပီး ထောင်ခဵပစ်လိုက်တဲ့ဟာမဵြိး။
နောက်္ဘပီးတော့ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ လူႛအခငြ့်အရေးကိုမင့်ိုိံင် တိုႛဆိုလိုႛရိရြင် အ႟ိုက်လည်းခံရသေးတယ်၊္ဘပီးတော့တခၝ ထောင်လည်းအကဵခံရသေးတယ်၊ အဲဒၝမဵြိးတေကြ ႟ပ်ြယက်ြလာတော့မြာဗဵ၊ ခေတ်ကာလဋ္ဌကီးက ဂဵပန်ခေတ်မြာထက်တောင် ပိုဆိုးနေတယ်ဗဵ၊ လူမိုက်တေအြုပ်ခဵပ်ြတဲ့ခေတ်ဋ္ဌကီူးဖစ်နေတော့၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛလည်း ရြေႛဆက်္ဘပီး ဗမာူပည်မြာ ဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားလိုႛတောင် မရတော့ပၝဘူး။
ဦးဝင်ိးုိံင် (ရန်ကုန်္ဘမြိႛမြိုိံင်ငံရေးသမား)
ုသဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၀၇ rfa.org/Burmese
(၁၉၈၈ လူထုလပ်ြရြားမအြစပိုင်းမြာ)္ဘမြိႛထဲကို ကဵနော်တိုႛ လုံးဝမသြားဘူး၊ ဘာူဖစ်လိုႛလဲ ဆိုတော့္ဘမြိႛထဲက အေူခခံလူတန်းစားတြေ မဟုတ်ဘူး၊ သူတိုႛက ဒီနေႛူဖစ်နေတဲူ့င်္ပံနာတေအြပေၞမြာ အသိဆုံးလူတြေူဖစ်တယ်။ ဒၝပေမယ့် သူတိုႛက ခံစားခဵက်အရ ဒီလောက် မူပင်းထန်ဘူး၊ ဒီလပ်ြရြားမဋ္ဌြကီးမြာ မပၝိုိံင်သေးဘူးလိုႛ ကဵနော်က တက်ြတယ်။ အဲဒီတော့ စောစောက သံဃာတော်တေနြဲႛ ကဵနော် ခေၞခဵလာတဲ့ စစ်ေုကာင်းက အေူခခံထုတေထြဲ အရင်သြားလိုက်တော့၊ အဲဒီ ၁ သိန်းကေဵာ် ရတော့မြ တာမြေ၊ အိုးစု၊ ပုဇန်ြတောင် အဲသလို … ကနေမ္ဘြမြိႛလယ်ခေၝင်ကို စခဵီတက်လာခဲ့တာ၊္ဘမြိႛလယ်ခေၝင်လည်းရောက်ရ္ဘောမြိႛထဲက လူတြေ အကုန်လုံး ဆင်း္ဘပီးပၝတဲ့အဆင့်ူဖစ်သြားတာ။
လပ်ြရြားမတြေကြို လုပ်တဲ့အခၝ စနစ်တကဵ၊ နည်းနာ အရ လုပ်ဆောင်ိုိံင်ရင် လူတေဟြာထက်ြလာတယ် ဆိုတဲ့ အတြေႛအဋ္ဌကြံ အသိအူမင်ကို ရတယ်၊ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်အထိူပင်ဆင်ိုိံင်မလဲ။ စနစ်တကဵူပင်ဆင် ဖောက်ခြဲိုိံင်တယ်ဆိုရင် ကဵနော်တိုႛက အောင်ပဲကြို ရတယ်။
ဗမိာုိံင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကေဵာင်းသားသမဂ္ဂမဵားအဖြဲႛခဵပြ် အထေထြေအြတငြ်းရေးမြးအူဖစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ
ုသဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၀၇ rfa.org/Burmese
ထူးခားတဲူ့ဖစ်စဉ်တေကြို သတင်းယူဖိုႛက ခက်ခဲပၝတယ်။ ခက်ခဲပေမယ့် အခဵြိႛရတဲူ့ပည်တငြ်းသတင်းတေအြနေနဲႛ စာပေစိစစ်ရေူးဖတ်တဲ့အခၝ ပၝခငြ့်ရမြာလည်း မဟုတ်ပၝဘူး။ အမဵားအာူးဖင့်က သိပ်္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကြိးစားပမ်းစား လုပ်္ဘပီးတော့ မရြာုကတော့ဘူး။ သိန္ဘေပီပေၝ့၊ ဘယ်သတင်းမဵြိးဆိုရင်ူဖတ်ပစ် လိမ့်မယ်၊ ဘယ်သတင်းမဵြိးဆို ခငြ့်ူပမြယ်ဆိုတာ ဂဵာနယ်လုပ်တဲ့သူတြေ အတော်မဵားမဵားက သိနေုကပၝ္ဘပီ၊ အဲတော့ ဋ္ဌကြိးစားပမ်းစား မလုပ်ုကတော့ဘူး။
ဦးဟိန်းလတ် (ပေၞူပလြာဂဵာနယ် အယ်ဒီတာခဵပြ်)
ုသဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၇ voanews.com/burmese
သားတိုႛကို ဖမ်းလည်း ဒီလိုင်္ပံနာမဵြိးကေူဖရငြ်းသြာိးုိံင်တာမြ မဟုတ်တာ။ အားလုံးက စိုးရိမ်နေုကတယ်၊ ပူပန်နေုကတယ်၊ ရြေႛလ္တွောက် ဘယ်လိုရပ်တည်သြာုးကမလဲ၊ ဘယ်လို စားသောက်နေထိုင် သြာုးကမလဲ။
အမိက်ြပုံလိုနေရာမဵြိးမြာ သူမဵားပစ်သြားတဲ့အမိက်ြထဲက ခရမ်းသီးလိုဟာမဵြိး ကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး၊ မုန်လာဥ ကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး ရြေးရြာနေတဲ့သူတြေ ရိတြယ်။ ဟိုတနေႛကဆိုရင် ခြေးကေဋ္ဋးဖိုႛ ထမင်းအသိုးတေကြို ပလပ်စတစ်အိတ်နဲႛထည့်္ဘပီး အိမ်ရြေႛပစ်ထားတာကို ကောက်သြားတဲ့သူတြေ ရိတြယ်။ ဘယ်လောက် စိတ်မခဵမ်းသာစရာ ကောင်းသလဲ။ ဒီုကားထဲကမြ ထပ်္ဘပီးတော့ ကလေးတေကြို ဖမ်းတယ်ဆိုရင်လည်း ပ္ဘိုပီးတော့ စိတ်မခဵမ်းသာစရာတြေူဖစ်တော့မြာပၝ။
ုသဂုတ်လအတငြ်း ဖမ်းဆီးခံရသူ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင်တစ်ဦး၏မိခင်
ုသဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၀၇ voanews.com/burmese
“ ရပ်ကက်ြထဲက အ္ဘမဲတမ်းမူးနေတတ်တဲ့ အမူးသမားကို အထင်မသေးနဲႛကြ … လူတြေ မလုပ်ခဵင်တဲ့၊ အဓိကက လူတြေ မလုပ်ရဲတဲ့ အလောင်းရေခဵြိးပေးတာတြေ အလောင်ူးပင်တာတြေ လုပ်တတ်တယ်ကြ … မင်း သိရဲႛလား … ဟေ့ရောင် … လူတစ်ယောက်ခဵင်းစီမြာ ထူးခဋ္ဋန်မတြစ်ခုတော့ ရိရြမယ်ဆိုတာ မင်းလက်ခံရမယ် ဟေ့ရောင် … မင်း ကန်ြပဵတြာ ဘယ်လောက်တော်တော် … မင်း စေဵးရောင်းတတ်ရဲႛလား ဟေ့ရောင် … စေဵးရောင်းတဲ့မိန်းကလေးက မင်းလောက် ကန်ြပဵတြာ မကိုင်တတ်ပေမယ့် … မင်းထက် စေဵးရောင်းတတ်တယ်ကြ …“
ုသဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၀၇ mghla.blogspot.com
ဗမာစစ်သားဆိုရင် ကေဵာင်းသားတေကြို မပစ်ရက်မြာစိုးလိုႛ ကရင်တပ်တြေ၊ ခဵင်းတပ်တေကြို ရန်ကုန်ကိုခေၞထားတာ တဲ့ … ဒီစာပိုဒ်ကတော့ သိပ်ကိုဆိုးတဲ့ လူမဵြိးရေးမုန်းတီးမြူဖစ်စေတဲ့ message ပၝနေတယ်။ … ဘယ်ဓာတ်ပုံ ဘယ်မတ်ြတမ်းဗီဒီယိုကည့်ုကည့် ဗမာစစ်သားတေပြၝ။ ပစ်တုန်းခတ်တုန်း ဆဲသံဆိုသံတေကြလည်း ဗမာသံတေပြၝပဲ။ ယောင်ယမ်း္ဘပီးတော့ တိုင်းရင်းသားတေကြို မမုန်းပၝစေနဲႛ။
ုသဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၀၇ generation96.blogspot.com
မနေႛကတုန်းက (ရဲစခန်းအခဵပ်ြထဲ သေသြားတဲ့သားရဲႛ အလောင်းကိုေူမမူမပ်ြခင်ရိုက်ထားတဲ့) ဓာတ်ပုိံစ်ြခဵက်ခြဲလောက် လာတောင်းတယ်။ အိမ်ကိုလာတာ၊ အိမ်ကို ရဲိံစ်ြယောက် လာတောင်းတယ်။ ဘာအေုကာင်းေုကာင့် ပေးရမြာတုန်းလိုႛေူပာလိုက်တယ်လေ။ ဒီတခၝလိုႛ ဘာလုပ်အုန်းမလိုႛတုန်းလိုႛ ။ သားဓာတ်ပုံကို ဖေဵာက်ဖဵက်္ဘပီးတော့ ဘာအဋ္ဌကံအဖန် ရိုက်မလိုႛတုန်း၊ မပေိးိုံင်ဘူးလိုႛ။ ဘာလုပ်မြာတုန်းမေးတော့ ခဏလေးပၝတဲ့။ ခဏလည်း မပေးဘူး၊ အပိုင်လည်း မပေးဘူး၊ ဘာမမြဆိုင်လိုႛ မပေိးိုံင်ဘူးလိုႛ။ ဘယ်တော့မြ လာမတောင်းနဲႛ မပေိးိုံင်ဘူးလိုႛေူပာလိုက်တယ်။
မင်းတိုႛက ဘာဆိုင်လိုႛ မနက်က လာတောင်းတာတုန်းဆိုတော့ ကဵနော်တိုႛက ရဲစခန်းကပၝတဲ့။ ရဲစခန်းဆိုရင် ငၝကေုကာက်လနြ်းလိုႛ မင်းတိုႛရဲစခန်းဋ္ဌကီးက လူသတ်လနြ်းလိုႛလိုႛ ပေးပၝတဲ့ စိတ်ပေၝက်ပေၝက်နဲႛ မပေိးိုံင်ဘူး ဘာလုပ်မြာတုန်း သတ်ိုံင်ရင် ငၝ့ကို သတ်သြားလေလိုႛ မပေးဘူးလိုႛေူပာလိုက်တယ်။ မပေးဘူး။ ကဵပ်ြမယ် ခူံပင်းနေတာ အခု အရူးတပိုင်းလိုဖစ်နေတာ … ။
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေႚက မိတ္ဇီလာူမြိႚနယ် အမတြ် (၁) ရဲစခန်းတငြ်
ဒဏ်ရာမဵာူးဖင့်သေဆုံးခဲ့သူ အခဵပ်ြသား ကိုကေဵာ်ဌေး၏မိခင်
ုသဂုတ် ၃၊ ၂၀၀၇ dvb.no
ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႛ၏ လတ်ြလပ်ရေးကို အဆင်ေူပစြာ နေသားတကဵူပန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်မြာ ကဋ္ဋိုံ်ပ်တိုႛတာဝန်ဝတ္ဇရားမဵာူးဖစ်လာုကပၝေုကာင်း။ လတ်ြလပ်ရေး အခငြ့်အရေးကို ကဋ္ဋိံ်ုပ်တိုႛူပင်ူးပစြာ အလိုရြိခဲ့သလို လတ်ြလပ်သော လူမဵြိးတိုႛ၏ တာဝန်ဝတ္ဇရားမဵားကိုလည်း ထမ်းဆောင်ဖိုႛရန်ြေိာံင့်ြေိံးဆိုင်းငံူ့ခင်း အလဵဉ်းမရြိဘဲ တညီတညတ်ြတည်း ဆောင်ရကြ်ုကရန်ူဖစ်ပၝေုကာင်း၊ အခငြ့်အရေိးံငြ့် တာဝန်ဝတ္ဇရားသည် အစဉ်ဒန်ြတြဲလဵက် ရြိသည်ူဖစ်၍ လတ်ြလပ်သော အခငြ့်အရေး ရရြိသည်ိံငြ့်လေဵာ်ညီစြာ လတ်ြလပ်သော တာဝန်ဝတ္ဇရားမဵားကိုလည်း ထိရောက်စြာ ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ရမည်ူဖစ်ပၝေုကာင်း …
၁၉၄၅ုသဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေႛကူပလြုပ်သည့် ရန်ကုန်္ဘမြိႛလုံးကဋ္ဋတ်ူပည်သူႛအစည်းအဝေး၌ေူပာုကားခဵက်မြ
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ မြေးလာမတြော့ လူဆိုတာ လူႛအခငြ့်အရေး ရြိသင့်တယ်၊ ရသင့်တယ်ဆိုတာ အမဵားဋ္ဌကီး နားလည်ပၝတယ်။ လူႛအခငြ့်အရေး မရြိတဲ့သူဟာ လူဖစ်ရကဵြိး မနပ်ဘူး။ ကဵမတိုႛဟာ ကဵမတိုႛိုံင်ငံသူ၊ိုိံင်ငံသားမဵား လူဖစ်ရကဵြိး နပ်အောင်လိုႛ၊ လူႛအခငြ့်အရေးမဵာူးပည့်ူပည့်စုံစုံ ရရြိုံင်အောင်လိုႛ ဒီမိုကရေစီ လပ်ြရြားမထြဲမြာ ပၝ၀င်နေတာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီမိုကရေစီလပ်ြရြားမြ အောင်ူမင်ရေးအတက်ြဆိုရင်ူပည်သူလူထုအားလုံးဟာ မိမိတိုႛရဲႚ အခငြ့်အရေးမဵား၊ အပေၝင်းအဖော်မဵားရႚဲ လူႛအခငြ့်အရေးမဵားကို ၀ိုင်း္ဘပီးတော့ ကာကယ်ြပေးရပၝမယ်။ ၀ိုင်း္ဘပီးတော့ စောင့်ရြောက်ပေးရပၝမယ်။ ဒီလို ကိုယ့်အခငြ့်အရေးမဵားကို ကာကယြ်ိုံင်မြ၊ စောင့်ရြောက်ိုံင်မြ နောက်တဆင့်တက်္ဘပီး ဒီမိုကရေစီအခငြ့်အရေးတြေ ရိုိံင်မြာူဖစ်ပၝတယ် … ။
၁၉၈၉ ခိုံစြ် ဇန်န၀ၝရီလ ဧရာဝတီတိုင်း စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အတငြ်း ဋ္ဌကံခင်း္ဘမြိႛ၌ေူပာုကားခဵက်မြ
သတ္ဇ၀ၝတေဟြာ အသက်ရင်ြရပ်တည်ရေးအတကြ် ဋ္ဌကီိးိုံင်ငယ်ညဉြ်း သဘောတရားနဲႛ လပ်ြရြားနေုကတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်သေတငြ်း ကိုယ်တူးနေုကတာနဲႛ တူနေမြာပၝပဲ … ။
မောင်ဝဏ္ဆ (စာရေးဆရာ၊ ဒၝရိုက်တာ)
၂၀၀၆ ခိုံစြ် အောက်တိုဘာလထုတ် မောင်ဝဏ္ဆ၏ “ကဋ္ဋန်တော် အူေုကာင်ုကား … စာအုပ်မြ “
အကဵြိးစီးပြားကို ဆောင်ရက်ြခဲ့သော် ရန်သူသည် မိတ်ဆေမြည်၏။
အကဵြိးစီးပြားကို မဆောင်ရက်ြခဲ့သော် မိတ်ဆေသြည်ပင် ရန်သူမည်၏ …
Posted by maungyit on September 3, 2007 in Quotable Quotes